USolwazi Nathan Andrews (kwesobunxele) noSolwazi Winfred Avogo.Click here for English version
Isikole seZifundo Zezokwakha neZentuthuko saseKolishi lezesiNtu besivakashelwe ngabacwaningi base-Carnegie African Diaspora Fellows uSolwazi Nathan Andrews noSolwazi Winfred Avogo izinyanga ezintathu.
I-Carnegie African Diaspora Fellowship yenzelwe ukunqanda ukuthuthela phesheya kwezingcithabuchopho zase-Afrika, kuqinise umsebenzi wezikhungo ezisuke zivakashelwe kuthuthukise ubudlelwano bokusebenzisana phakathi kwamanyuvesi ase-Afrika nawase-Canada nawaseMelika. Ixhaswa ngemali yi-Carnegie Corporation yase-New York kanti ilawulwa yi-Institute of International Education ngokubambisana ne-United States International University-Africa yaseNairobi, eKenya, edidiyela imisebenzi yomkhandlu owelulekayo i-Advisory Council.
USolwazi we-Global and International Studies, uSolwazi Andrews wase-University of Northern British Columbia (e-UNBC) e-Canada noSolwazi weSosiyoloji neZifundo Zezabantu noma Ezezinhlobo Zabantu uSolwazi Avogo wase-Illinois State University eMelika uhlangane neSikole sase-UKZN ukweseka izifundo zezifundiswa eziqhuba izifundo emikhankasweni eholwa yiDini.
Ikhuluma ngobumqoka balomkhankaso, iDini neNhloko yeSikole uSolwazi Ernest Khalema ithe: ‘I-UKZN ngenye yezikhungo zaseNingizimu Afrika ezivelele ezigxile ocwaningweni nasekufundiseni ezibalwa kuma-2.1% iminyaka ilandelana yi-Centre of World University Rankings kanti sisendaweni efanele yokuba seqhulwini kulokhu.’
U-Avogo uhlangene nomholi weqoqo lezabantu nezentuthuko uNks uNompumelelo Nzimande ocwaningweni olubheka umphumela weCOVID-19 esinkweni samagoduka KwaZulu-Natal naseGauteng. Ucwaningo luka-Avogo lugxile lapho kuhlangana khona ushintsho lomphakathi nohlobo lwabantu abahlala endaweni nezinto zezempilo, imiphumela yokuzala, ezempilo yokuya ocansini nokuzala, izinto zezenhlalo ezithinta ingculazi nesandulela-ngculazi, ukuphoqwa ukufuduka, izinto ezithinta isimo sokungalingani kwabantu besifazane emazweni ase-Afrika ngaphandle kwawaseNyakatho Afrika.
Ngokuka Nzimande, i-Carnegie Fellowship ‘ihlinzeke ngethuba lokubambisana emhlabeni endimeni yezezimo zabantu nezabantu. Lokhukubambisana kusiza abafundi ukuba abenza i-Onazi nabenza iMastazi ocwaningweni lwabo, ngezigcawu zokucobelelana nangeminye imikhankaso yokucijana ngamakhono.’
U-Andrews ubambisane noKhalema ukuqonda imiphumela yobhubhane iCOVID-19 emsebenzini nasekuqeqesheni izifundiswa.‘Ngezigcawu zokucijana ezihleliwe nezinye izinhlelo zezemfundo, lolucwaningo lenze ithuba lokufunda nokuqhamuka nezindlela zokusebenza ezivelele kwi-UKZN ne-UNBC mayelana nokufundisa, ukucija abantu, izinhlelo zokufunda, ucwaningo nezindlela zokweluleka abenza ucwaningo,’ kusho u-Andrews.
U-Andrews noKhalema bake basebenzisana kudala, bahlela ngokubambisana izincwadi eziningi ngenkathi bobabili besafundisa e-University of Alberta e-Canada. Baqhubeka basebenzisana ezinhlelweni ezehlukene ngemva kwalokho. Ngenkathi bese-UKZN abacwaningi be-Carnegie bahlangane nabafundi abenza ucwaningo, benza izingosi zokuqeqesha abantu ngocwaningo ukuqhakambisa isiko locwaningo olunzulu.
Ngaphezu kwalokho, kube namasemina okufundisa nawokucobelela abafundi abenza ucwaningo, kwaba namathuba okuhlanganisa izifundiswa ezisafufusa. Loluhlelo luveze nethuba lokuthi izikhungo zisayine izivumelwano zokusebenzisana, okuzolekelela uhlelo lokufinyelela emhlabeni jikelele lwe-UKZN.
Ephawula ngomphumela wohlelo locwaningo, Umholi weZifundo eMkhakheni Wokuthuthukiswa KoMphakathi uDkt Muzi Matse, uthe: ‘Lokhu kuveze indawo yokucija ekufundiseni nasekufundeni, kwadala amathuba kubasebenzi nakubafundi ukuthi babambisane ezintweni ezimqoka ezindleleni zokufunda, ucwaningo nokuthuthukisa izinhlelo zokufunda.’
Izinselelo ebezilindelekile emisebenzini yocwaningo yimpicabadala ngenxa yesimo seCOVID-19 nokutapa nokushisa amabhizinisi okusanda kwenzeka eThekwini, okuvale amathuba okusebenza. Nakuba zibe khona lezizinselelo, abacwaningi base-Carnegie basebenzise izithangami zokuxhumana ngobuchwepheshe ukwenza izithangami zokucijana, babamba iqhaza kumasimpoziyamu ahlelwe yisikole, amawebhina nezingqungquthela, okwenza umsebenzi wabo wathela izithelo kubafundi nakubasebenzi.
UDkt Maserole Kgari-Masondo.Click here for English version
UDkt Maserole Kgari-Masondo weSikole seziFundo ngeNhlalo yoMphakathi uthunywe nguMnyango WezeMfundo EyiSisekelo ne-United Nations Children's Fund (i-UNICEF) ukuthi abhale umhlahlandlela ozolekelela umnyango ukuthi uqede ubukoloni bemfundo eyisisekelo eNingizimu Afrika.
UKgari-Masondo unikwe umsebenzi wokuba enze umhlahlandlela i-Framework for the Decolonisation of the Curriculum, ezochushisa umsebenzi wokubuyekeza uhlelo lwemfundo ngokwethula izinto ezihambisana nomkhankaso wokuqeda ubukoloni emkhakheni weMfundo EyiSisekelo.
‘Into emqoka kumhlahlandlela bekuyimfundo ngolimi lwebele nokuthi kufanele usetshenziswe kanjani ngalesisikhathi sokuqeda ubukoloni,’ kusho uKgari-Masondo. ‘ENingizimu Afrika kugcizelelwa amalungelo okuthi abafundi bafunde ngolimi lwasekhaya, ikakhulu kuMabanga le-1 kuya kwele-3 nokushintshela esiNgisini kwabafundi esigabeni esiphakathi nendawo. Nokho inqubo yomnyango kuzwelonke ayiyaleli ukuthi yiluphi ulimi okufanele lusetshenziswe ukufunda nokufundisa. Lena yinto ekhethwa yisigungu esilawula isikole.’
Uthi ‘lokhu kusho izifundazwe nezikole kufanele zizinqumele ngolimi lokufundisa. Ngeshwa kunokubambezeleka ekufundiseni ngezilimi zebele kodwa ucwaningo lukhombisa ukuthi uMthethosisekelo weNingizimu Afrika entsha ugqugquzela ukuthi kufundiswe ngezilimi ezisemthethweni ezili-11 uma kufundwa noma kufundiswa.’
UKgari-Masondo uthi ucwaningo oluhlukene lukhombisa ukuthi izinga lokukwazi ukufunda eNingizimu Afrika liphansi kakhulu kuzona zonke izilimi, njengoba izivivinyo eziningi zokufunda zikhombisa ukuthi iningi labafundi baseNingizimu Afrika alikwazi ukufunda liqonde uma liqeda iBanga le-4 noma le-5.
‘Ngokwalemiphumela, abafundi abaphasi kahle kanti indaba yolimi ibonakala imqoka ekutheni abafundi baqonde into abayifundiswayo. Yingenxa yalesisizathu i-UNICEF noMnyango WeMfundo EyiSisekelo bengicele ukuthi ngiqhamuke nendlela yokuthi izilimi zasekhaya zingasetshenziswa kanjani uma kufundiswa noma kufundwa,’ kusho yena.
UKgari-Masondo usewuthumele umbiko kwi-UNICEF noMnyango WeMfundo EyiSisekelo. Izimemezelo ngokuzolandela ngomhlahlandlela ophakanyisiwe zizokwenziwa yi- UNICEF noMnyango emasontweni ezayo.
Umfundi oqhuba izifundo e-UKZN uNks Nombuso Khanyile nesikhwama nezimbadada kwase-Afrikan Passion Designs.Click here for English version